Madaxweynanaha oo ka hadlay Shirka burcad badeeda ee Dubai . Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Madaxweynanaha oo ka hadlay Shirka burcad badeeda ee Dubai . Madaxweynaha dowladda ayaa waxa uu ka sheegay shir looga hadlayo arrimaha burcad badeeda in sida wax looga qaban karo burcadda badda ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya.
Isaga oo qudbad ka jeediniyay Shirka looga hadlayo arrimaha burcad badeeda ee ka soconaya magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay in Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed in xalka kaliya ee wax looga qaban karo burcad badeeda ay tahay iyadoo la dhiso ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa badda islamarkaana dib loo howlgaliyo xabsiyada dalka, waxaana uu Caalamka ka dalbaday in arintaasi uu gacan weyn ka gaysto.
Sheekh Shariif ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay oo uu farta ku fiiqay in Maraakiibta Shisheeye ay dhibaato ku hayaan biyaha Soomaaliya oo uu sheegay in si sharci daro ah ay uga kaluumeystaan sun kiimiko ahna ay ku shubaan taasi oo uu sheegay in Soomaaliya dhib ku tahay oo aysan u rooneen nolosha dadka, isaga oo Caalamka ugu baaqay in arintaasi ay talaabo ka qaadaan oo ay wax ka qabtaan.
Shirkaani looga hadlayo arrimaha burcad badeeda Soomaaliya oo shalay furmay ayaa waxaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo goaanana laga soo saaro.